Turkiga oo amray in lasoo xiro mas'uuliyiin katirsan Dowlada Sucuudiga . — FAAFIYE.COM
Turkiga oo amray in lasoo xiro mas’uuliyiin katirsan Dowlada Sucuudiga .
By Editor	 On Dec 7, 2018
Warqad kasoo baxday Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Turkiga ayaa lagu amray in lasoo xiro labo mas’uul oo katirsan maamulka Aala-Sucuud.
Ragga la amray in lasoo xiro waxay kala yihiin Axmad Casiiri oo ahaa kuxigeenkii taliyaha guud ee Sirdoonka maamulka Aala-Sucuud iyo Sucuud Al-qaxdhaani oo ahaa la taliyihii hore ee Muxamed bin Salmaan.
Labadan mas’uul ayaa waxaa horey loogu eedayay iney mas’uul toos ah ka ahaayeen dilkii wariye Jamaal khashogi , waxaana markii ay soo baxday fadeexadaas uu boqorka Aala-Sucuud uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaaday.
Weli dowaldda Turkiga waxay daba taagantahay qadiyadda Jamaal Khashogi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda maamulka Aala-sucuud ee magaalada Istanbuul, waxaana la ogaaday in Muxamad bin Salmaan uu yahay qofka bixiyay amarka lagu dilay wariyahaas.
Al Shabaab oo qarax ku dishay Jeneraal Cumar dheere .
Aabe dilay labo gabdhood uu dhalay.
Wasaarada Caafimaadka oo la wareegtay Isbitaalka Banaadir.
Lafta-gareen oo loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Gaas Oo Maanta Ku Dhawaaqay In Uu Yahay Musharax.